Xiriirka Soomaliyeed ee Shataranjiga oo daaha ka rogay tartanka shataranjiga Iskuulada “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Xiriirka Soomaliyeed ee Shataranjiga oo daaha ka rogay tartanka shataranjiga Iskuulada “SAWIRRO”
Xiriirka Soomaliyeed ee Shataranjiga ayaa daaha ka rogay tartanka shataranjiga ee Iskuulada Gobolka Banaadir
Furitaanka tartankan shataranjiga ee iskuulada gobolkan Banaadir ayaa waxaa kasoo qeyb galay Guddoomiyaha xiriirka Soomaliyeed ee shataranjiga Axmed Cabdi Xasan Wataac iyo mas’uuliyiin ka kala socday iskuulada tartanka ka qeyb galaya.
Tartankan oo markii ugu horeysay la qabanayo ayaa waxaa ka qeyb galaya ardayda da’doodu ay ka yartahay 18-ka sano, waxaana tartamayaasha loo qeybiyey afar heer oo kala duwan oo kala ah ardayda da’doodu ay ka yartahay 12-ka sano, 14-ka sano, 16-ka sano iyo 18-ka sano.
Ugu horeyn waxaa furitaanka tartankan Shataranjiga ee ka hadlay Guddoomiyaha Guddiga Wabarashada iyo Garsoorka ee xiriirka Soomaliyeed ee Shataranjiga Cabdalla Cabdalla Cali kaas oo tartankan ku tilmaamay mid taariiqi ah oo loo baahnaa, waxuuna intaa kudaray in tartanka uu bilow u yahay tartamo ballaaran oo loo qaban doono iskuulada dalka .
Guddoomiyaha xiriirka Soomaliyeed ee Shataranjiga Axmed Cabdi Xasan Wataac oo isna ka hadlay furitaanka tartanka ayaa sheegay iney xiriirkiisu guul u tahay qabashada tartanka shataranjiga ee iskuulada Gobolkan Banaadir oo ay ka qeyb galayaan arday aad u da’yar.
Tartanka oo ka qeyb galayaan 30 Arday oo ka socta 10 iskuul ayaa socon doona mudoo laba maalmood ah, waxaana gabagabdiisa abaal marino qiimo badan la gudoonsiin doonaa ardayda soo tiigsata kaalmaha 1-aad 2-aad iyo 3-aad.
Shaqaalaha Wasaaradda Haweenka ee Koonfur Galbeed oo loo furay siminaar